← ကျော်လှ၊ ဦး(မောင်းထောင်)
၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ ၀၉:၃၆ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
အရေးမကြီး စကြာမင်းသား‎ ၁၃:၄၈ -၃၉‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Reverted 1 edit by 116.206.137.44 (talk) to last revision by NjsBot. (TW) စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
ဘကြီးတော်(စစ်ကိုင်းမင်း)‎ ၁၃:၄၇ -၃၉‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Reverted 1 edit by 116.206.137.44 (talk). (TW) စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
စကြာမင်းသား‎ ၁၁:၁၈ +၃၉‎ ‎116.206.137.44 ဆွေးနွေး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ဘကြီးတော်(စစ်ကိုင်းမင်း)‎ ၁၁:၁၈ +၃၉‎ ‎116.206.137.44 ဆွေးနွေး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ်
ကနောင်မင်းသား‎ ၀၅:၂၄ ၀‎ ‎Sit Yan Naing ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် Android app edit
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:RecentChangesLinked/ကျော်လှ၊_ဦး(မောင်းထောင်)" မှ ရယူရန်